Prôtestantisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Protestantisma)
Ny prôtestantisma dia iray amin' ireo sampana lehibe ao amin' ny kristianisma ankoatry ny katôlisisma sy ny Ôrtôdôksia. Ny prôtestantisma dia mahafaoka ireo fiangonana nipoitra mivantana na tsia amin' ny Refôrmasiona (na Refôrma) ka mizara ho sampany lehibe (toy ny adventisma, ny anabatisma, ny anglikanisma, ny fiangonana batista, ny fiangonana nohavaozina, ny loteranisma, ny metôdisma, ny pentekôtisma) sy sampany madinika (toy ny hositisma, valdisma, ny fiangonan' ny mpirahalahy, ny fihetsiketsehan' ny fanamasinana, ny koakerisma) ary ny maro hafa koa. Ireo fiangonana ara-pilazantsara (na Evanjelika) dia indraindray atao hoe anisan' ny Prôtestanta nefa indraindray koa lazaina hoe sampana manokan' ny kristianisma.
Ireo Tsangan-kevitr'i Lotera 95 eo amin'ny varavaram-piangonan'i Wittenberg
Laharana faharoa ny prôtestantisma, manaraka ny katôlisisma, raha ny isan' ny mpino ao aminy no heverina izay mahatratra ny 40%n' ny Kristiana maneran-tany.
1 Ny niandohany
1.1 Ireo tsangan-kevitra 95
1.2 Fanonganana an' i Lotera
1.3 Ny "adin' ny Tantsaha"
1.4 Fampitsaharana ny "adin' ny Tantsaha"
2 Ireo fototry ny finoana prôtestanta
2.1 Ny fahasoavana irery ihany
2.2 Ny finoana irery ihany
2.3 Ny Soratra Masina irery ihany
2.4 I Kristy irery ihany
2.5 An' Andriamanitra irery ihany ny voninahitra
2.6 Tokony hihavao mandrakariva ny Fiangonana
2.7 Mpisorona ny mpino rehetra
3 Ny finoana sy ny fanaon' ny Prôtestanta
3.1 Ny Baiboly
3.2 Ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty
3.3 Ny fanompoam-pivavahana
3.4 Ny fiarovana ny zavaboary
3.5 Ny sakramenta
3.6 Ny fanamasinam-panambadiana
3.7 Ny fandevenana
4 Fahasamihafan' ny Prôtestanta amin' ny Katôlika
4.1 Ny loharanon' ny fampianarany
4.2 Ny mpitondra fiangonana
4.3 Ny fitondram-piangonana
4.4 Ny sakramenta
4.5 Ny amin' ny olona maty
4.6 Ny fanonganana
4.7 Ny amin' i Maria
4.8 Tsy mila mpanelanelana
5 Ny sampan' ny prôtestantisma
5.1 Ny sampana lehiben' ny prôtestantisma
5.1.1 Ny loteranisma
5.1.2 Ny fiangonana nohavaozina
5.1.3 Ny anabatisma
5.1.4 Ny anglikanisma
5.1.5 Ny batisma
5.1.6 Ny metôdisma
5.1.7 Ny adventisma
5.1.8 Ny pentekôtisma
5.2 Ireo sampana madiniky ny prôtestantisma
5.2.1 Ny valdisma
5.2.2 Ny hositisma
5.2.3 Ny koakerisma
5.2.4 Ny Fiangonan' ny mpirahalahy
5.2.5 Ny Fihetsiketsehan' ny fanamasinana
6 Ireo firehana nivoatra avy amin' ny prôtestantisma
6.1 Ireo fihetsiketsehana iraisam-pinoana
6.2 Ireo firehana hafa
7 Jereo koa:
8 Loharano sy tsiahy ary fanamarihana
Ireo tsangan-kevitra 95Hanova
Ireo tsangan-kevitra 95 an' i Lotera
Tamin'ny 31 Oktobra 1517 no nanombohan' ireo zava-niseho niteraka ny prôtestantisma tamin' ny nametahan' ilay monka (na moanina) alemàna sy dokotera an-teôlôjia, dia i Martin Lotera (alemàna: Martin Luther), ireo tsangan-kevitra miisa 95 niampangany izay ataony ho fahadisoan' ny Fiangonana katôlika rômana tamin' ny fotoan' androny. Nanambara i Lotera fa ny Baiboly irery ihany no manana fahefana azo anankinana ny finoana, izany no atao hoe Sola Scriptura. Narovan' i Joany I any Saksônia (alemàna: Johann Friedrich der Grossmütige; frantsay: Jean Frédéric Ier de Saxe) (1503-1554) i Lotera izay nandoro ny taratasin' ny Papa, taratasy nitondra ny lohateny latina hoe Exsurge Domine ("Mitsangàna Tompo ô" [fa misy amboadia manimba ny tanim-boalobokao]) izay nandrahona fanonganana an' i Lotera tamin' ny taona 1520. Izany dia "taratasy manameloka ny fahadisoan' i Martin Lotera sy ireo mpanaraka azy" (latina: "Bulla contra errores Martini Lutheri et sequacium").
Fanonganana an' i LoteraHanova
Ny taona 1521 dia heverina koa ho taona manan-danja: tamin' ny volana Janoary dia nanda ny hiala amin' ny heviny i Lotera teo anatrehan' ny fivoriamben' ireo Fanjakana mivondrona ao amin'ny Empira Masina Rômana Jermanika notanterahina tao Worms, satria aminy dia ny Baiboly sy ny feon' ny fieritreretany ihany no manam-pahefana aminy fa tsy ny antanantohatra misy eo amin' ny mpitondra fiangonana ka noroahina tsy ho isan' ny fiangonana izy. Sambany no nisy firesahana ny amin' ny fiantsoana an' Andriamanitra mivantana sy ny feon' ny fieritreretana ka anisan' ny mampiavaka ny prôtestantisma izany.
Ny "adin' ny Tantsaha"Hanova
Anisan' ireo hevitr' i Lotera ny tokony hahafahan' ny olon-drehetra mamaky ny Baiboly izay tsy anavahana saranga, ka izany fitovian' ny olombelona rehetra izany dia nisy akony tao amin' ireo vahoaka izay betsaka tantsaha, hany ka niteraka ilay atao hoe "adin' ny Tantsaha" (alemàna: Deutscher Bauernkrieg) izany tamin' ny lohataonan' ny 1525 tao amin' ny Empira Masina Romana Jermanika.
Mba hampitsaharana haingana izany firongatan' ny herisetra nataon' ny olona tamin' ny sarangan' ny mpitondra fivavahana izany dia nivory voalohany tao Spira tamin' ny taona 1526 ny andriandahy. Nifanarahana ny didim-panjakana izay ampiharina amin' ny tany misy hotakotaka, dia tapaka fa misafidy ny fanompoam-pivavahana tiany hatao ao amin' ny fanjakany ny andriana tsirairay. Noho izany dia tsy maintsy nandositra tany amin' ny fanjakana mankasitraka ny finoany ny mpanohitra. Izany fanomezana lanja ny fivavahana tiana harahina izany dia efa natombok' i Joany I any Saksônia tamin'ny faramparan'ny taona 1525 nampanjary fivavavahana ekem-panjakana ny loteranisma.
Fampitsaharana ny "adin' ny Tantsaha"Hanova
Tsy tao amin' izany fivoriana izany, izay natrehin' ireo andriana mpandatsa-bato, i Karôlo V (frantsay: Charles Quint; alemàna: Karl V; latina: Carolus V) ka tsy nankasitraka izany fanapahan-kevitra izany. Nampangain' ny tao amin' ny Papa ho nanohana an' i Lotera izy ka nanapa-kevitra ny hisakana ny fiparitahan' ireo petra-kevitr' i Lotera ireo. Nampiantso fivorian' andriana tao Spira i Karôlo V sy i Ferdinando I rahalahiny, izay nanafoanany ny marimaritra iraisana nataon' ireo andriana tamin' ny tantsaha. Noho izany dia tafapetraka amin' ny toerany indray ny fanaovana lamesa amin' ny fiteny latina. Namaly izany ireo andriana notarihin' i Joany avy any Saksônia tamin' ny alalan' ny famoahana fanohanan-kevitra (latina: protestatio). Ireo andriana nanao sonia ireo dia natao amin' ny teny latina hoe "protestantes", izay niavian' ny teny hoe prôtestanta.
Ireo fototry ny finoana prôtestantaHanova
Ny fahasoavana irery ihanyHanova
Mino ny Prôtestanta fa sy mendrika ny famonjena azony avy amin' Andriamanitra ny olombelona, nefa nomen' Andriamanitra azy maimaimpoana amim-pitiavana izany. Izany koa no mahatonga ny olona ho afaka mitia. Noho izany, ny maha izy azy ny olona iray eo anatrehan' Andriamanitra dia tsy miankina amin' ny fitiavany an' Andriamanitra na noho ny toetra tsara ananany na ny fahamendrehany na ny toerany eo amin' ny fiarahamonina. Izany no itenenan' ny Prôtestanta hoe "ny fahasoavana irery ihany" (latina: Sola gratia).
Ny finoana irery ihanyHanova
Amin' ny Prôtestanta, ny finoana dia fanomezan' Andriamanitra tamin' ny fihaonan' ny isam-batan' olona amin' Andriamanitra, amin' ny alalan' i Jesoa Kristy. Ny finoana irery ihany (latina: Sola fide) fa tsy ny foto-pampianaram-pinoana (latina: doctrina) na ny asan' olombelona no mahavonjy. Tsy mitovy ny fomba mahatonga io finoana io ao amin' ny olona tsirairay ka mety miseho tampoka izany na miandalana. Samy miaina izany finoana izany amin' ny fombany manokana ny olona tsirairay satria valin' ny fanehoan' Andriamanitra fitiavana ny finoana.
Ny Soratra Masina irery ihanyHanova
Amin' ny Prôtestanta dia ny Baiboly no mirakitra ny tenin' Andriamanitra ka izy irery ihany no manana fahefana ara-teôlôjia sady mpanoro lalana ho an' ny finoana sy ny fiainana. Izany no fintinina amin' ny hoe "ny Soratra Masina irery ihany" (latina: Sola Scriptura). Ny toriteny ataon' ny mpanao raharaham-piangonana voaofana tamin' izany, indrindra voaofan' ny Fanahy Masina, no manazava azy. Amin' ny alalan' ny fijoroana vavolombelona ampitainy no amaritany fitsipi-piainana izay ahatakarana sy iasan' ny andraikitry ny tsirairay.
I Kristy irery ihanyHanova
I Kristy irery ihany (latina: Solus Christus) no mpanalalana eo amin' Andriamanitra sy ny ombelona, fa tsy ny olo-masina na i Maria na ny anjely.
An' Andriamanitra irery ihany ny voninahitraHanova
Andriamanitra irery ihany no masina, manana ny fomba maha Andriamanitra azy fara tampony. Noho izany, tsy misy ezaka na asan' olombelona afaka hihambo hanana toetra fara tampony sy tsy azo ovana na sahaza ho an' ny olona sy ny zavatra rehetra, anisan' izany ny teôlôjia. An' Andriamanitra irery ny voninahitra (latina: Soli Deo gloria). Ankoatra izany, ny fanomezan' Andriamanitra fahalalahana ny olombelona dia mahatonga ny Prôtestanta hankasitraka ny rafi-piarahamonina mandala ny fahasamihafana sy ny fahalalahana.
Tokony hihavao mandrakariva ny FiangonanaHanova
Ireo andrin' ny Fiangonana (latina: institutio) dia zavatra mifamatotra amin' ny maha olombelona ka tsy atao lohalaharana satria mety ho diso izy ireo, hoy i Lotera. Noho izany ny Fiangonana dia tokony handinika amin-tsaina mitsikera ny fiainany sy ny fampianarana ataony, amin' ny alalan' ny famakiana ny Baiboly tsilovin' ny Fanahy Masina. Ny Katôlika anefa mihevitra fa ny Fiangonana no mitarika azy mazava. Ny fiheveran-tena hahita ny marina dia mety hitondra mankany amin' ny fianteherana amin' ny tenim-pinoana (latina: dogma "fahamarinana tsy azo lavina"), izay tapahin' ny fivorian' ny eveka (kônsily) na omen' ny Papa noho ny Papa lazaina fa "tsy mety diso". Noho izany dia tokony hihavao mandrakariva ny Fiangonana (latina: Ecclesia semper reformanda).
Mpisorona ny mpino rehetraHanova
Ainga fototry ny Refôrmasiona prôtestanta ny fiekena fa "mpisorona ny mpino rehetra", izay heverin' i Lotera ho foiben-kevitra satria ny olona vita batisa dia "mpaminany sy mpisorona sady mpanjaka" eo ambany fifehezan' i Kristy. Manafoana ny fisian' ny antanantohatra (ambaratonga) ao amin' ny Fiangonana (fahambonian' ny mpitondra sy fahambanianan' ny entina, ohatra) izany fiheverana izany. Ny vita batisa tsirairay dia mitovy lanja, anisan' izany ireo manao asa fanompoana masina toy ny mpitondra fiangonana. Satria izy ireo nianatra teôlôjia sady eken' ny Fiangonana, izy ireo dia miasa ho an' ny mpiray finoana aminy amin' ny alalan' ny fanambaràna ny Tenin' Andriamanitra (amin' ny alalan' ny toriteny sy fanomezana ny sakramenta) sy ny fanatanterahana iraka manokana vokatr' izany. Afaka mananana anjara asa fanompoana masina ao amin' ny Fiangonana prôtestanta sasany ny vehivavy, ka mitombo miandalana izany arakaraka ny firenena sy ny vanimpotoana.
Ny finoana sy ny fanaon' ny PrôtestantaHanova
Ny fampianarana prôtestanta dia miorina amin' ny Soratra Masina, dia ny Baiboly izay fitambaran' ny Testamenta Taloha sy Vaovao. Ny soratra "apôkrifa" (na deôterôkanônika) dia heverin' ny mpanavao fiangonana ho tsara ho fantatra ihany nefa tsy anorenam-pinoana ka tsy natonta intsony ao amin' ny Baiboly prôtestanta nanomboka tamin' ny taonjato faha-19. Misy Baiboly loterana sasany izay ahitana ny boky apôkrifa.
Ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny matyHanova
Sahala amin' ireo Kristiana hafa dia mino ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty sy ny famonjena azo avy amin' izany ny Prôtestanta ka zava-dehibe indrindra amin' ny finoany izany.
Maro ireo fanao iraisany amin' ny Katôlika toy ny vavaka, ny famakiana ny Baiboly ao am-piangonana, ny fivavahana isan' Alahady, ary ny fandraisana ny Fanasan' ny Tompo.
Ny fiarovana ny zavaboaryHanova
Sahala amin' ny Kristiana hafa koa dia mino ny Prôtestanta fa misy Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao ka mandray anjara izy ireo amin' ny fiarovana ny Zavaboarin' Andriamanitra izy samy izy na koa miaraka ao amin' ny fiombonam-piagonana samihafa (ekiomenisma).
Ny batisa sy ny fanasan' ny Tompo ihany no sakramenta ao amin' ny Prôtestanta, izay ilazany, araka ny fahazoany ny soratra ao amin' ny Baiboly, fa ireo roa ireo ihany no naorin' i Jesoa Kristy. Ao amin' ny Fiangonana prôtestanta sasany, indrindra ireo Fiangonaba ara-pilazantsara (Evanjelika), dia tsy atao batisa afa-tsy ny olon-dehibe nefa ny fiangonana prôtestanta hafa dia afaka manao batisa zazakely.
Ny kônfirmasiona (fanamafisana ny fanoloran-tena tao amin' ny batisa) dia mamarana ny fanabeazana ara-pinoana, izay tanterahin' ireo feno 14 na 15 taona. Tsy sakramenta ny kônfirmasiona fa dingana atao hahafahana mandray ny Fanasan' ny Tompo sy hidirana amin' ny fiainam-pinoan' ny olon-dehibe.
Ny fanamasinam-panambadiana dia fitahian' Andriamanitra ny fitiavan' olombelona ary aleon' ny Fiangonana prôtestanta maro ny fisaraham-panambadiana toy izay ny tonkantrano tsy azo iainana na dia tsy tena amporisihina aza izany. Azo atao ny manambady fanindroany ho an' izay efa nisara-panambadiana.
Atao hampaherezana ny fianakavian' ny maty sy ny namany ny fanompoam-pivavahana atao amin' ny fandevenana ka aompana amin' ny fanambaràna ny Vaovao Mahafaly sy ny fampanantenana ny fitsanganan' ny tena amin' ny maty. Alevina amin' ny fomba tsotra amim-panjana ny maty: vakina ny andalana iray ao amin' ny Baiboly ary misy vavaka atao ho an' ny fianakaviana. Tsy misy ny fanaovana lamesa fahatsiarovana ny maty. Amin' ny ankapobeny dia azo atao ny fikirakirana ny vatan' ny maty hitadiavana ny marina amin' ny alalan' ny aotopsý.
Fahasamihafan' ny Prôtestanta amin' ny KatôlikaHanova
Na dia eo aza ireo zavatra maro itovian' ny prôtestantisma amin' ny katôlisisma, satria samy avy amin' ny sampana tandrefan' ny kristianisma, ary na dia misy aza ireo fampifanakekezana ny fampianarany vokatry ny fifampiresahana eo amin' ny samy Fiangonana (ekiomenisma) dia maro ny zavatra tsy itovian' ny fanompoam-pivavahana prôtestanta amin' ny fanompoam-pivavahana katôlika.
Ny loharanon' ny fampianaranyHanova
Ny Prôtestanta dia tsy manana afa-tsy ny Baiboly ho loharanon' ny fampianarany. Laviny ny "Lovam-pampianarana masina" izay anisan' ny loharanon' ny tenim-pinoana (na dôgma) eken' ny Katôlika. Mino izy fa ny Fanahy Masina dia manampy azy amin' ny fahazoana ny tian' ny Baiboly hambara. Manafintohina azy ireo ny mandre tenim-pinoana vaovao avoakan' ny Fiangonana katôlika rômana ka ohatra amin' izany ny finoan' ny Katôlika ny tsy fahazoan' ny fahotana lovàna (tamin' i Adama sy i Eva) an' i Maria hatrany an-kibon-dreniny (1854) sy ny tsy fetezan-dison' ny Papa (1870) ary ny fampakaram-belona an' i Maria any an-danitra (1950), izay heveriny fa mitovy amin' ny fanambaràna mitohy tsy dia misy fifanarahana firy amin' ny Filazantsara.
Ny mpitondra fiangonanaHanova
Tsy misahana ny andraikitra manokan' ny mpisorona (pretra) ny mpitondra fiangonana prôtestanta. Mpanolo-tsaina sy manam-pahaizana ny mpitandrina (na pastora) ka mampianatra ny mpivavaka sy manoro lalana azy. Izy ireo no mitarika ny fanompoam-pivavahana sy mampandray ny Fanasan' ny Tompo. Noho ny fandaminana ihany no tsy anaovan' ny mpivavaka tsotra an' izany, izay azony atao koa, ka isan' izany ny fitorian-teny ho an' izay nahazo fiofanana ara-teôlôjia. Satria ny mpino rehetra dia mpisorona avokoa (araka ny Epistily ho an' ny Hebreo). Ao amin' ny Fiangonana katôlika kosa, mandritra ny fanononany ny famelan-keloka ao am-piangonana, dia manome tokoa ny famelan-kelon' Andriamanitra ny pretra, fa ny pastora kosa dia mampahatsiahy fotsiny mandritra ny litorjia ny fampanantenana ny famelan-keloka azon' izay mibebaka sy mino; ny sisa rehetra dia raharaha mivantana eo amin' ny mpino tsirairay sy Andriamanitra (ny Anglikana ihany no mampiasa ny teny hoe pretra "mpisorona", nefa tsy amin' ny heviny katôlika).
Ny pastora prôtestanta dia manan-jo hanambady ary ny vehivavy dia afaka manao raharaham-pastora. Nampiditra ny fitovoan' ny mpisorona (pretra) ny Fiangonana katôlika tamin' ny taonjato faha-11 noho ny antony ara-pratika fa ireo mpitondra fanavaozam-pinoana prôtestanta tamin' ny taonjato faha-16 kosa dia nanizingizina ny lanja ara-teôlôjian' ny fanambadian' ny mpitondra fiangonana.
Ny Prôtestanta dia tsy ananan' ny Papa na ny Kardinaly fahefana. Noho ny antony ara-tantara dia misy Fiangonana prôtestanta maro dia maro izay tsy misy ifandraisany fa samy mahaleo tena. Ny Fiangonana prôtestanta entina eveka, izay atao hoe indraindray mpanaramasom-piangonana (avy amin' ny dikan' ny teny grika hoe episkopos), ka rafitra episkôpaly no misy arak' izany (toy izany ny Loterana maro sy ny Anglikana ary ny Metôdista), na entina filan-kevitry ny loholona mahefa, ka ny paroasy dia mitambatra amina fitambaram-piangonana fehezin' ny fivoriam-be atao hoe sinôda, ka atao hoe rafitra sinôdaly. Ireo fiombonana ao amin' ny isam-pirenena ireo dia mamondrona fiangonana iray firehana (loterana, nohavaozina, anglikana, batista, metôdista, sns.) ao amin' ny fiombonana iraisam-pirenena izay amin' ny ankapobeny mikambana amin' ny Fiombonana Ekiomenikan' ny Fiangonana (frantsay: Conseil œcuménique des Églises).
Roa ihany ny sakramenta ao amin' ny Prôtestanta, dia ny batisa sy ny fanasan' ny Tompo, nefa fito ny an' ny Katôlika, dia ny batemy, ny eokaristia, ny konfirmasiona, ny fampihavanana, ny fanambadiana, ny fanokanana pretra atao hoe Sakramentan' ny filaharana, ary ny fanosorana ny marary). Misy ao amin' ny Prôtestanta ihany ireo fomba ireo nefa tsy isaina ho sakramenta (ohatra, ny kônfirmasiona sy ny famboraham-pahotana). Azon' ny Prôtestanta atao ny misara-panambadiana sady azony atao ny manambady fanindroany rehefa nisara-panambadiana.
Tsy mitovy amin' ny an' ny Katôlika ny fiheveran' ny Prôtestanta ny fanasan' ny Tompo na eokaristia. Tsy mino ny fiovan' ny mofo ho tenan' i Jesoa, na ny divay ho ran' i Jesoa (latina: transsubstantiatio; grika: μετουσίωσις / metousiosis) ny Prôtestanta. Inoan' ny ankamaroan' ny Prôtestanta ny maha ao amin' ny fanasan' ny Tompo an' i Jesoa fa ara-panahy ka tsy tandindona (grika: σύμβολον / sumbolon) izany. Niezaka nanakambana zavatra mifanohitra i Lotera ka aminy dia fiombonan' ny mofo amin' ny tenan' i Jesoa sy ny diavay amin' ny ran' i Jesoa (latina: consubstantiatio) no tena izy, izay noraisiny avy amin' ny hevitr' i William of Ockam (frantsay: Guillaume d'Occam) sy i John Duns Scot. Ny fiangonan' i Taizé dia mampiasa ny teny hoe "fahatsiarovana ny sorona" izay noheveriny fa mety hiraisan' ny Prôtestanta.
Ny amin' ny olona matyHanova
Tsy misy amin' ny Prôtestanta ny afo fandiovana sy ny fanandratana ho olomasina ny olona iray efa maty. Amin' ny Prôtestanta dia tsy misy olona ho masina mihoatra noho ny mpiara-mivavaka aminy. Amin' ny Katôlika ny afo fandiovana dia toeram-pijalian' ny olombelona aorian' ny fahafatesany mba hanonerany ny fahotany sy hidiovany amin' izany ka hahafahany miditra any am-paradisa.
Misy ihany ny fanapotrahana na fanonganana (fanesorana ny mpivavaka iray tsy handray ny sakramenta) izay ampiharin' ny eveka ( na pastora) na ny filankevitry ny loholona, nefa tsy dia misy manao firy intsony izany (afa-tsy ao amin' ireo Fiangonana ara-pilazantsara sasany izay mampiasa izany mba hanamafy ny firaisan' ny mpiara-mivavaka ka mandroaka eo no ho eo ilay naongana tsy ho isan' izy ireo).
Ny amin' i MariaHanova
Ny Prôtestanta dia manaiky fa natera-birijiny i Jesoa ka apetrany ho vavolombelona azo itokisana sahala amin' ireo mpianatr' i Kristy i Maria. Tsy mino anefa izy ireo fa tsy nandova ota avy any am-bohoka i Maria, satria filazàna tsy mifototra amin' ny Baiboly izany.
Tsy mila mpanelanelanaHanova
Ny Prôtestanta dia tsy mila mpanelanelana (na i Maria na ny olomasina na ny anjely) rehefa mivavaka. Ny mpino tsirairay dia tompon' andraikitra eo anatrehan' Andriamanitra ka ny resaka ifanaovany amin' Andriamanitra dia tsy tokony handalo amina mpanelanelana. Tsy ilaina noho izany ny mikonfesy (manambara ny fahotan' ny tena amin' ny mpitondra fivavahana).
Ny sampan' ny prôtestantismaHanova
Vao nanomboka fotsiny ny Refôrmasiona dia efa tsy nitovy hevitra ny samy mpanavao fiangonana fa samy nanana ny fampianarany sy nanorina ny fiangonany, ary izany fizarazarana izany dia mitohy hatramin' izao andro ankehitriny izao.
Ny sampana lehiben' ny prôtestantismaHanova
Ireto ny sampana lehiben' ny prôtestantisma:
ny loteranisma (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny nohavaozina (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny anabatisma (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny anglikanisma (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny batisma (taonjato faha-17 hatramin' izao)
ny metôdisma (taonjato faha-18 hatramin' izao)
ny adventisma (taonjato faha-19 hatramin' izao)
ny pentekôtisma (taonjato faha-20 hatramin' izao)
Ny loteranisma dia fiangonana manaraka ny teôlôjia nipoitra avy amin' ny fandinihana sy soratr' i Martin Lotera. Tamin' ny taona 1597 dia namaritra ny hoe loterana ny teôlôjiana tao Wittenberg hanodroana ny fiangonana marina.
Amin' ny Loterana dia tsy voavonjy amin' ny alalan' ny asany, na ara-pitondrantena izany na amin' ny fitiavam-bavaka ny olombelona; tsy mandray anjara amin' ny fanavotana azy ny asa tsara ataon' ny olona na ny foto-pampianaram-pinoana, fa ny finoana ny fahafatesan' i Jesoa Kristy mitondra fanavotana teo amin' ny hazo fijaliana; ny Baiboly , izay mirakitra ny tenin' Andriamanitra sy hany mpanoro lalana ho an' ny finoana sy ny fiainana, no fahefana fara tampony sady tokana tsy maintsy ankatoavin' ny Kristiana sy ny Fiangonana; ny famonjena ny fanahin' ny olombelona dia tsy amin' ny alalan' ny fanelanelanan' ny andrim-pivavahana na ny sisan-javatra navelan' ny maty na ny mpitondra fivavahana na ny olomasina na ny anjely, fa amin' ny alalan' i Kristy mivantana.
Ny Fiangonana nohavaozina dia fiangonana nandray ny fampianaram-pinoan' ireo mpanavao fiangonana toa an' i Ulrich Zwingli sy i Jean Calvin. Ampahany amin' ny fampianaran' i Lotera ihany no noraisiny.
Tsipahiny ny tenim-pinoana momba ny fiovan' ny mofo ho tenan' i Jesoa sy ny divay ho ran' i Jesoa (fiovam-pisia-maha-izy) izay ampianarin' ny Fiangonana katôlika rômana, sy ny amin' ny fikambanan' ny mofo amin' ny tenan' i Jesoa sy ny divay amin' ny ran' i Jesoa na konsobstansiasiona izay ampianarin' ny Fiangonana loterana. Amin' ny Fiangonana nohavaozina dia fahatsiarovana miendrika tandindona ny sakramentan' ny Fanasan' ny Tompo.
Manantitra ny maha tsitoha (mahery indrindra) an' Andriamanitra ny fampianaran' ny Fiangonana nohavaozina, nefa tsy mifanohitra amin’ ny fahalalahan' ny Kristiana sy ny maha tompon' andraikitra azy izany. Ny toetra mihoa-draha ananan' Andriamanitra anefa mametra ny fahefana rehetra mety hananan' ny olombelona, na amin' ny lafiny fivavahana izany na amin' ny lafiny pôlitika.
Ny anabatisma dia manandratra avo ny batisa an-tsitrapon' ny olona efa tonga saina. Mihevi-tena ho nipoitra avy hatrany amin' ny Fiangonana voalohany fa tsy nikambana tamin' ny Fingonana katôlika ny Anabatista. Ankehitriny ny Anabatista dia mitambatra ao amin' ny vondrom-pivavahana mandala ny tsy fampiasana herisetra, ary koa ny tsy fanoherana amin' ny anaran' ny fitiavan' Andriamanitra sy noho ny Fanjakan' Andriamanitra tsy eto amin' izao tontolo izao.
Ny anglikanisma dia fivavahana kristiana niorina voalohany tao Angletera vokatry ny fialany avy amin' ny Fiangonana katôlika tamin' ny taona 1534. Any amin'ireo firenena miteny anglisy no tena ahitana azy, indrindra ireo zanatany britanika taloha, nefa koa miely any amin'ny tany andehanan'ny Britanika manerana an'izao tontolo izao io fiangonana io. Eo anelanelan’ ny katôlisisma sy ny prôtestantisma ny anglikanisma izay milaza ny tenany ho sady katôlika (nefa tsy rômana noho izy nanohy ny fifandimbiasana apôstôlika) no nohavaozina (noho ny nandraisany ny Fanekem-pinoan' i Westminster tamin’ ny taona 1646). Izany no atao amin' ny teny latina hoe via media ("lalana anelanelany").
Ny batisma dia firehana ao amin' ny fiangoanana ara-pilazantsara izay notarihina pastora roa tamin' ny taonjato faha-17, dia ilay anglisy atao hoe John Smyth tao Holandy tamin' ny taona 1609, sy i Thomas Helwys tao Angletera tamin' ny taona 1612. Omeny lanja ny fahateraham-baovao sy ny batisan' ny olon-dehibe. Mizaka tena ny fiangonana tsirairay isan-toerana. Ny fitambaran' ny mpino rehetra no tompon' ny fahefana amin' ny fampandehanana ny fiangonana ka tsy miavaka loatra ny sokajin' olona atao hoe "mpitondra fiangonana".
Ny metôdisma dia fiangonana niforona vokatry ny fivakisana avy amin' ny Fiangonana anglikana, izay ivondronan' ny Fiangonana isan-karazany, nefa samy nahazo fampianarana avy amin' ny toritenin' i John Wesley tamin' ny taonjato faha-18. Ny fahamatorana nananan' ireo mpikambana tao amin' ny Holy Club ("Fikambanan' ny Olomasina") tamin' ny fanatanterahany ny adidiny amin' ny maha Kristiana azy no nanomezan' ireo namany azy ny anaram-bosotra hoe Methodists ("mpanaraka fomba fiasa maty paika"). Ara-tantara dia ny metôdisma no nampiely indrindra ny Fifohazam-panahy lehibe.
Ny adventisma dia hetsika ara-pinoana kristiana milenarista nanomboka tamin' ny taonjato faha-19 tamin' ny fotoana nampiroborobo ny Fifohazam-panahy lehibe faharoa tao Etazonia izay mampianatra momba ny Fiavian' i Jesoa Kristy fanindroany izay hiseho tsy ho ela amin' ny andro farany. Ny adventisma ka ny tena be mpanaraka indrindra dia ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito.
Ny finoana sy ny fandaminana ao amin' ny adventisma dia sahalahala amin' ny an' ny Batista ihany. Nefa misy zavatra vitsivitsy natovony ary nisy hafa koa izay nanteriny bebe kokoa, indrindra ny momba ny fiafaran' izao tontolo izao (eskatôlôjia). Inoan'ny Adventista ny fiverenan' i Kristy eny amin' ny rahon' ny lanitra alohan' ny arivo taona (millenium). Tamin' ny tapany farany amin' ny taona 1846, ny Sabatan' ny andro fahafito (ankalazaina isaky ny Asabotsy) sy ny asa fanompoana indroa miantoana nataon' i Kristy ao amin' ny fitoerana masina ao an-danitra dia eken' izy ireo. Fampianarana lehibe koa ny fivoasana ara-paminaniana ny hafatr' ireo anjely telo ao amin' ny Apôkalipsy (Apo. 14) sy ny fifandraisany amin' ny asa fanompoan' i Kristy ao amin' ny Masina Indrindra ao an-danitra ho fanombohan' ny fitsarana izay tsy maintsy hialoha ny fiverenan' i Jesoa sy ny fiafaran' izao tontolo izao.
Ny pentekôtisma dia firehana ara-pilazantsara vokatry ny Fifohazam-panahy notarihin' ny pastora amerikana Charles Fox Parham sy William Joseph Seymour tao Etazonia tamin' ny taona 1906.
Manome lanja manokana ny Baiboly, ny fahaterahana indray, ny batisan' ny Fanahy Masina, ny fanomezam-pahasoavan' ny Fanahy Masina, ny batisan' ny olon-dehibe ny pentekôtisma. Ny ankamaroan' ny Pentekôtista dia miombon-kevitra amin' ny fampianaram-pinoana momba ny tsy fisian-diso ao amin' ny Baiboly. Ny Pentekôtista koa dia manantitra ny amin’ ny fanomezam-pahasoavana avy amin' ny Fanahy Masina izay heveriny ho fisehoan' Andriamanitra ara-panahy amin' ny fomba mitohy eo amin' ny tantaran' ny olombelona sy amin' ny tantaram-piainany.
Ireo sampana madiniky ny prôtestantismaHanova
ny valdeisma na valdisma (taonjato faha-12 hatramin' izao)
ny hositisma (taonjato faha-15 hatramin' izao)
ny koakerisma (taonjato faha-17 hatramin' izao)
ny Fiangonan' ny mpirahalahy na Mpirahalahy ao Plymouth (taonjato faha-19 hatramin' izao)
ny Fihetsiketsehan' ny fanamasinana (taonjato faha-19 hatramin' izao)
Ny valdisma dia fiangonana nipoitra avy tamin' ny toriteny nataon' i Pierre Valdo. Io no fiangonana prôtestanta italiana voalohany izay hita indrindra ao Italia sy any Amerika Atsimo.
Ny hositisma dia fihetsiketsehana ara-pivavahana teraka avy amin' ny fampianaran' i Jan Hus. Nisy akony eo amin' ny Fiangonana môraviana sy ny Fiangonana hosita tsekôslôvaka izany firehana izany. Amin' ny Hosita dia tokony hiverenana ny Fiangonana apôstôlika sy ara-panahy ary mahantra, ary ny fanavaozam-piangonana dia tokony handalo amin' ny fahefan' ny olon-tsotra tsy mpitondra fivavahana.
Ny koakerisma na Fikambanan' ny Sakaiza dia fikambanana ara-pinoana niorina tao Angletera tamin' ny taonjato faha-17 vokatry ny fialan' ireo heverina ho mpivily lalana avy amin' ny Fiangonana anglikana. I George Fox (1624-1691) no heverin' ny mpahay tantara ho nanangana ilay fikambanana na ny tena nanan-danja indrindra tamin' ireo mpitarika azy.
Ny Fikambanan' ny Sakaiza tsy manana fiekem-pinoana ary tsy misy ambaratongam-pitondrana eo amin' ny fandaminana ny fiangonany. Amin' izy ireo dia raharahan' ny tsirairay ny finoana ka malalaka amin' ny fanarahana ny zavatra mandresy lahatra azy ny isam-batan' olona. Amin' izy ireo dia tsy ilaina ny sakramenta, na ny batisa na ny fanasan' ny Tompo. Ny batisan' ny Fanahy dia zavatra iainana sy fiovana anaty, ary ny firaisana amin' i Kristy dia miseho ao amin' ny fihaonan' ny mpivavaka. Amin' ny Koakera dia misy ny atao hoe "Fanambaràna mitohy": tsy vita indray mandeha ny fanambaràn' Andriamanitra fa mitohy ka mampitombo hatranihatrany ny fahalalantsika ny marina.
Ny Fiangonan' ny mpirahalahyHanova
Ny Fiangonan' ny Mpirahalahy (na Plymouth Brethren amin' ny teny anglisy) dia fikambanana kristiana evanjelika teraka tao Dublin any Britaina Lehibe manodidina ny taona 1830. Nivaky ilay fikambanana ka tamin' ny taona 1848 no fivakisana lehibe indrindra izay niteraka ny Open Brethren (nanaraka an' i George Müller sy i Henry Craik ) sy ny Exclusive Brethren (fikambanana nanaraka an' i John Nelson Darby).
Ny Fihetsiketsehan' ny fanamasinanaHanova
Ny Fihetsiketsehan' ny Fanamasinana dia firehan' ny kristianisma evanjelika avy amin' ny metôdisma. Tamin' ny taona 1894 no nisarahan' io fihetsiketsehana io tamin' ny metôdisma. Manome lanja ny foto-papianarana ny amin' ny "fahatongalafatra kristiana" ny mpikambana ao amin' io fihetsiketsehana io. Izany foto-pampianarana izany dia nivoatra avy amin' ny fampianaran' i John Wesley, izay milaza fa azo atao ny miaina malalaka nefa tsy mahatanteraka fahotana an-tsitrapo, ary azo tanterahirahina eo no ho eo amin' ny alalan' ny fahasoavana izany. Niteraka ny fandrosoan'ny pentekotista sy ny fanavaozana karismatika io fihetsiketsehana io teo amin'ny tantara.
Ireo firehana nivoatra avy amin' ny prôtestantismaHanova
Ireo fihetsiketsehana iraisam-pinoanaHanova
ny evanjelisma (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny fihetsiketsehana karismatika (taonjato faha-20 hatramin' izao)
ny Fiangonana karismatika vaovao (taonjato faha-20 hatramin' izao)
Ireo firehana hafaHanova
ny arminianisma (taonjato faha-16 hatramin' izao)
ny poritanisma (taonjato faha-16 sy faha-17)
ny pietisma (taonjato faha-17 hatramin' izao)
ny liberalisma (taonjato faha-19 hatramin' izao)
ny neô-ôrtôdôksia (taonjato faha-20 hatramin' izao)
ny paleô-ôrtôdôksia (taonjato faha-20 hatramin' izao)
ny fondamentalisma kristiana (taonjato faha-20 hatramin' izao)
ny môdernisma (taonjato faha-20 hatramin' izao)
Loharano sy tsiahy ary fanamarihanaHanova
↑ "Pewforum: Christianity (2010)" (PDF). Notsidihina tamin'ny 14/05/2014.
↑ L. Siegele-Wenschkewitz, "Priesthood of All Believers", ao amin'ny The encyclopedia of Christianity, Eerdmans Publishing, 2005. p. 350-351.
↑ Jereo ny 1Kor. 15.14: "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo".
↑ Le programme "Justice, Paix et Sauvegarde de la Création" du Conseil Œcuménique des Églises: un déclic pour les chrétiens Archived Septambra 29, 2018 at the Wayback Machine [tahiry].
↑ Joseph Coppens, Sacerdoce et célibat: études historiques et théologiques, Duculot, 1971, p. 524
↑ "Sainteté et martyre selon la tradition protestante" par Gottfried Hammann, dans Saints, sainteté et martyre: la fabrique de l'exemplarité: actes du colloque tenu à l'université de Neuchatel les 27 et 28 novembre 1997, éditions de la Maison des sciences de l'Homme, Paris.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Prôtestantisma&oldid=1039408"
Dernière modification le 2 Novambra 2021, à 05:21
Voaova farany tamin'ny 2 Novambra 2021 amin'ny 05:21 ity pejy ity.